Hagaajinta astaanta ayaa ka fududaan karta sida muuqata | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | logos, Tricks
Ku saabsan astaamaha Ma ogaan doono wax dambe oo aan la aqoon, waa aqoonsiga shirkadda waxayna ku bixisaa sawir muuqaal ah adeegyada ama alaabooyinka laga bixin karo.
In kasta oo sidan loo sameeyay naqshadeynta garaafka iyo isbeddelkeeda degdegga ah, way fiicantahay in markasta lala socdo, mana ahan inay tahay inaan gebi ahaanba bedelno astaanta si aan ugu cusbooneysiino waqtiyada na saameynaya, laakiin mararka qaarkood way wanaagsan tahay in wax yar laga tilmaamo ama xitaa la beddelo qoraalka la socda. Waa kuwan talooyin kooban oo lagu hagaajinayo astaanta.
Tilmaamuhu waa tilmaamo yar oo naqshadeynta garaafyada ah si loo ogaado waxa aan ka dalban karno hal-abuurka Maxaan haynaa kiraystay si loo hagaajiyo astaanteena, ama xitaa inaan nafteena gelino ujeedka inaan hagaajino.
2 Beddel qoraalka
3 Naqshad fudud
Waxaan leenahay astaan ​​halkii aan wax ahaan lahayn fudud oo yar waxay u martaa dhinaca kale. Waxaan u qeexi karnaa si markaa fikradda aan rabno inaan ku muujino ay ula soo degto macaamilka si dhakhso leh. Nike waa tusaalaha ugu fiican ee hoose.
Maanta minimalism waa isbeddel, waana yarayn karnaa adeegsiga khadadka si fikradda guud ee astaanteenu u noqoto mid kooban inta suurtogalka ah. Haddii aad eegto noocyada moodada sida Nike ama Adidas, astaantoodu waa mid aad u fudud, oo isbeddelaya waqti la socda.
Akhriste ahaan, Hugo, wuxuu kugula talinayaa, sidoo kale waxaa jira muhiimadda qaan-gaarnimada astaan ​​u oggolaaneysa wax ka beddelkeeda ku dhowaad heer calaamadeed, adigoon ilaawin asalkeeda, Kuwa maskaxdeenna ku hagaajiyay waxa astaanta iyo wax soo saarkeedu ka dhigan yihiin.
Haddii, sabab kasta ha noqotee, aynaan heli karin hab aan "gacan" ku dhigno astaanta, malaha waa qoraalka midka loo baahan yahay in lagu hagaajiyo ilo hadda jira oo gaara nooc kale oo macaamiil ah sida dhalinyarada mustaqbalka ah. Pepsi waa tusaale kale oo arrintan la xiriira.
Haddii aan hayno astaan ​​horey u ahayd sumadda shirkadda, waa in lagu xisaabtamo in markii astaanta si asal ah loo beddelo, ay sidoo kale tahay macmiilka ayay siineysaa macnaha ganacsigeenu isbedelayo heer la mid ah waqtiyada casriga ah.
Habka ugu yar iyo midka fudud ayaa ku xirmi kara macaamiisheenna maaddaama shirkadeennu ay dib isu xaqiijinayso wuuna sii kordhayaa muujinaya xoog iyo go’aan qaadasho.
Ma heli karno waddo aan ku beddelno qoraalka, astaanta ayaa noo muuqata in ay tahay in ay ahaato sida ay tahay, laakiin Maxaa dhacaya haddii aan wax ka beddelo midabka?
Waxaad horeyba u ogaan doontaa in midabadu muujinayaan dareen ama shucuur. Waxay kuxirantahay adeegga ama badeecada aan bixinno, ama markay shirkaddu tahay, waxay noqon kartaa mid xiiso leh isticmaal noocyo kala duwan oo midabbo ah. Noocyo kala duwan oo midabada dhulka ah ayaa u adeegi kara inay sii wadaan xaqiijinta xirfadeena, in kasta oo had iyo jeer ay ku xirnaan doonto dadweynaha aan wax ka qabano.
Sikastaba, hadaanan helin waddo aan hal talaabo horey uguqaadno dhanka sameynta astaanteena, midab beddelka ayaa macnaheedu noqon karaa u guurista marxalad cusub shirkadda ama shirkadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Tilmaamo dhawr ah si loo hagaajiyo astaanta oo looga dhigo mid gaar ah
Waa salaaman tahay Manuel. Aad baad ugu mahadsantahay wadaagistaada.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro indha indheyn. Markaan ka hadlayno minimalism, waxaa habboon in la muujiyo awoodda isku-dhafka, maaddaama noocyada sida Disney, Pepsi, Coca, Nike, ama Adidas, ay leeyihiin suurtagalnimada in la yareeyo cunsuriyadooda illaa heer sidan ah, haddii aynaan garanayn cidda ay yihiin waa, ma fahmi karno ugu yaraan, markaa waa faa'iido in la tilmaamo in ay jirto biseyl gaar ah oo astaan ​​ah iyo meeleynta astaanteeda, taas oo u oggolaaneysa qeexitaan ku dhowaad heer calaamadeed ah
Waad ku mahadsantahay indha indheynta oo aad run uga tahay bisaylka astaanta iyo meeleynta astaantaada!